Mamwe matambudziko eApple Watch akateedzana 3 newarchOS 7 | Ndinobva mac
Mamwe matambudziko eApple Watch akateedzana 3 newarchOS 7
Munguva pfupi yapfuura, ruzivo rwakatanga kuoneka nezve kusapindirana kwevamwe vashandisi vane yavo Apple Watch nhepfenyuro 3 neiyo nyowani yekushandisa system yekuvandudza. watchOS 7 yaikonzera matambudziko muiyo GPS system yewachi isingabvumidze kunyora zvakanaka mitambo yemitambo yevaridzi vayo. Zvino, vamwe vashandisi vari kuratidza zvimwe zvinoenderana nyaya pakati peiyo modhi yekutarisa uye nesisitimu yekushandisa.
watchOS 7 yakaburitswa kuruzhinji svondo rapfuura Kunyangwe zvichingogara zvichikwanisika kuti mamwe matambudziko amuke, senge iyo GPS, isiri iyo yakajairika, ndeyekuti ivo vanotarisa pane modhi. Apple Watch Series 3 vashandisi, vari kuudza nyaya dzakasiyana siyana kubva pakuisa watchOS 7, kusanganisira zvisaririra reboots, kusashanda zvakanaka, uye zvimwe zvishoma.
Iyo nyowani yekushandisa sisitimu inoshanda chaiko kubva kune iyo Apple Watch modhi. Saka zvinonyanya kuitika kuti ubatwe netweezers uye kwete kusununguka sezvakatarisirwa nevanjiniya. Pane Apple maforamu ekutsigira, pane yakatsaurwa tambo kune Apple Watch Series 3 varidzi vane watchOS 7. Kumwe kwekunyunyuta kwakanyanya iyo wachi inoita kunge iri kurongedza patsva kakawanda pazuva. Vazhinji vashandisi veApple Watch Series 3 vanongedzera kuWOSOS 7 se "yakashata" yekuvandudza OSOS Apple yaburitsa parizvino.
Ndakave nerakawanda reboots pazuva kubva pakuvandudzwa, inokumbira pasipoti yangu uye inoratidza isina mavara manhamba pane chiitiko. Pakanga pasina kumbove nedambudziko rakadai muWatchOS 6 kana kumberi.
Chinhu chakanyanya kushata pamusoro peichi chiitiko ndechekuti hapana imwe nzira yekudzokera kune yapfuura vhezheni yeanoshanda system. Kunyangwe hazvo kuvandudzwa kutsva, watchOS 7.0.1, yaburitswa, zvinoita sekunge dambudziko raivepo harina kugadziriswa. Uye zvakare, Apple ichiri kutengesa iyo yakateedzana 3 muzvitoro, asi tichifunga nezvematambudziko aya inogona kunge yanga isiri zano rakanaka kuti vaite kuti nhepfenyuro 4. inyangarike.Pamwe vaifanira kunge vasiya iyi modhi ndokuparadzira nhevedzano 3, nekuti kubva pane Maona, haina kunyanyoenderana newatchOS 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mamwe matambudziko eApple Watch akateedzana 3 newarchOS 7
Bored yatovepo yekuenderera mberi reboots. Kunze kwekunonoka chizvarwa chekutanga Apple Watch chinotaridzika
Chekutanga pane zvese, ndinokukorokotedza nekuratidza dambudziko iri sezvo mashoma masayiti akatsaurirwa kuApple ari kuriita uye iri dambudziko rakakomba, nekuti rinosiya mawachi asingabatsiri ari kutengwa panguva ino, nepo Apple ichiramba yakanyarara nezve dambudziko uye izvo hazvikusiye iwe munzvimbo yakanaka.
Zvekuremekedzwa kwechiratidzo chete, ndinofunga kuti zvinofanirwa, kutanga kwezvose, kumisa kutengeswa kweakateedzana matatu uye kubva ipapo, ita chirevo chekuzvipira kugadzirisa icho nekukurumidza sezvazvinogona.
Alberto selma akadaro
Ndine akateedzana 3 uye zvimwechetezvo zvinoitika kwandiri.Inotangazve kana ichida.Ndakatangazve wachi uye ndisingabatanidzwe kubva kune iphone sezvavakandiudza mukutsigirwa kwehunyanzvi uye hapana, Inoramba yakadaro. kuwana gadziriso yeizvi
Pindura kuna Alberto selma
eDEX-UI imwe sarudzo yekupedzisira yeMacs edu
Inosarudza svondo muhondo pakati peEpic Mitambo VS APPLE